China Aluminum Rod Manufacturer and Supplier |Kunda
Fampiharana isan-karazany: fitaovana famindrana angovo (toy ny: fitoeran'entana fiara, varavarana, varavarankely, vatan'ny fiara, vombony mafana, akorandriaka amin'ny efitra).Endri-javatra: antonony hery, tsara harafesiny fanoherana, tsara welding fampisehoana, tsara dingana fampisehoana (mora ny extruded), tsara oxidation sy fandokoana fampisehoana.
Saran'ny fampiharana:fitaovana famindrana angovo (toy ny: fitoeran'entana fiara, varavarana, varavarankely, vatan'ny fiara, vombony mafana, akorandriaka eny amin'ny efitra).
1000 andiam-baravarankely aluminium dia an'ny andian-dahatsoratra manana atiny aluminium indrindra amin'ny andiany rehetra.Ny fahadiovana dia mety hahatratra mihoatra ny 99.00%.
2000 andian-tsoratra aluminium.Izy io dia miavaka amin'ny hamafin'ny avo, miaraka amin'ny votoatin'ny varahina avo indrindra, izay eo amin'ny 3-5%.The 2000 andian-dahatsoratra aluminium tsorakazo dia aviation aluminium fitaovana, izay tsy matetika ampiasaina amin'ny indostria mahazatra.
3000 andiany aluminium tsorakazo dia vita amin'ny manganese ho singa fototra.Andiany miaraka amin'ny fiasa manohitra ny harafesina tsara kokoa.
4000 andian-dahatsoratra aluminium tsorakazo an'ny fitaovana fanorenana, mekanika faritra, forging fitaovana, welding fitaovana;ambany levona teboka, tsara harafesiny fanoherana, hafanana fanoherana sy ny mitafy fanoherana
5000 andian-dahatsoratra aluminium tsorakazo azo antsoina koa hoe aluminium-magnesium alloys.Ny endri-javatra lehibe dia ny hakitroky ambany, ny tanjaky ny tensile avo ary ny elongation avo.
6000 série aluminium tsorakazo.Izy io dia ahitana singa roa amin'ny magnesium sy silisiôma, izay mety amin'ny fampiharana amin'ny fepetra avo lenta amin'ny fanoherana ny harafesina sy ny oxidation.
7000 andian-dahatsoratra aluminium tsorakazo indrindra misy zinc.Anisan'ny andiany aerospace ihany koa izy io.Izy io dia aliminioma-magnesium-zinc-varahina firaka, firaka azo tsaboina amin'ny hafanana, ary firaka aluminium mahery vaika misy fanoherana tsara.
8000 andian-dahatsoratra aluminium tsorakazo no tena ampiasaina amin'ny aluminium foil, ary aluminium tsorakazo dia tsy matetika ampiasaina amin'ny famokarana.
teo aloha: Lead Roll
Manaraka: Lead Plate